Herisetra teny Ampitatafika Nidoboka am-ponja ireo zanaka kaomisera sy olona 2
Niakatra fitsarana omaly talata 18 jona ilay kaomisera sy ny zanany roa an-daniny ary ireo olona roa an-kilany izay nilaza fa niharan’ny herisetra. Samy nitory teny amin’ny fitsarana sy ny polisy moa izy roa tonta ireo.
Taorian’ny fanadihadiana natao teo anivon’ny inspection générale de la Police nationale IGPN sy ny polisin’ny faritany dia natolotra ny fitsarana ny raharaha ka voatazona am-ponja vonjimaika eny amin’ny fonjan’Antanimora ireo mirahalahy zanaka kaomisera sy ireo roalahy nilaza fa niharan’ny herisetra. Nahazo fahafahana vonjimaika kosa ilay kaomisera. Raha tsiahivina, voatonona ho nikasi-tanana sy nandratra olona teny Ampitatafika ny kaomiseran’ny polisy sy ny zanany ny sabotsy alina faran’ny volana mey teo. Efa nanome fanampim-panazavana ny teo anivon’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka fa raha vao naharay ny « indro-alefa » na « sois-transmis » avy amin’ny Fitsarana teo Anosy ny tompon’andraikitra teo anivon’ny polisy dia nampiantso avy hatrany ireo mpitory. Taorian’ny fampiantsoana, noraisina am-bavany tao amin’ny polisy IGPN ny fanambaran’ny mpitory sy ny vavolombelona avy amin’izy ireo ny talata sy alarobia, taorian’io. Taorian’io, natao famotorana tao amin’io sampandraharaha io ihany koa ilay kaomisera sy ireo zanany izay voatonontonona tamin’ity tranga ity.